केमिकल नहुँदा रोकियो रगत परीक्षण- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
केमिकल नहुँदा रोकियो रगत परीक्षण
बिरामीका आफन्त चर्को मूल्य तिरेर निजीमा धाउन बाध्य
जेष्ठ २६, २०७८ प्रशान्त माली
काठमाडौँ — पाटन अस्पतालमा केमिकल नहुँदा ‘एबीजी’ रगत जाँच दुई सातायता बन्द छ । बिरामीका आफन्तहरू चर्को मूल्य तिरेर निजीमा धाउन बाध्य छन् । एबीजी जाँच विशेष गरी आईसीयूमा उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको गरिन्छ । बिरामीको रगतको नमुना लिएर त्यसमा अक्सिजन, कार्बनडाइअक्साइड, सोडियम, पोटासियमलगायतको मात्रा जाँच गरिन्छ ।
ललितपुरकी रत्नदेवी महर्जन एक्कासि पेट दुखेपछि पाटन अस्पताल भर्ना भइन् । उनको अवस्था असामान्य बन्दै गएपछि आईसीयूमा सारियो । चिकित्सकले तत्काल सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी र एबीजी जाँच गर्न भने । आफन्तले सबै जाँच गराउन २ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ तिरे । तर, अस्पतालको ल्याबमा जाँदा एबीजी अन्त गराउन भनियो । पुल्चोकको अल्कामा पुगेर जाँच गराउँदा १ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो । पाटनमा भए त्यसको १ हजार १ सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो ।
दोलखाबाट आएर आईसीयूमा उपचार गराइरहेका सुवास केसीका आफन्तले पनि सुमेरु अस्पतालमा एबीजी जाँच गराए । ‘केमिकल अभाव त निजीमा पनि हुनुपर्ने हो’ सुवासका दाइ सुनीलले दुःख व्यक्त गरे । उनीहरू जस्तै एबीजी रगत जाँच गर्न केमिकल नहुँदा निजीमा धाउने थुप्रै छन् । अस्पताल प्रशासनले भने निषेधाज्ञाका कारणले केमिकल बजारमा अभाव भएको दाबी गरेको छ । ‘एबीजी चेक गर्न केमिकल बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकबाट झिकाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएका कारणले ल्याउन नसकेको हो,’ पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले भने ।
अस्पतालमा खोकीको औषधिको उत्पादन पनि सातायता ठप्प छ । अस्पतालबाट उत्पादन गरिने यो औषधि प्राइभेट फार्मेसीको भन्दा आधा सस्तो छ । भरपर्दो मानेर अस्पतालमै पुगेर खरिद गर्ने बिरामी धमाधम फर्किरहेका छन् । नुवाकोटका रामकुमार ढुंगानाको पिसाब थैलीको क्यान्सरका कारण अप्रेसन भयो । चार वर्षयता उनी कृत्रिम पिसाब थैलीलगायत औषधि अस्पतालबाट लिँदै आएका छन् । रामकुमारका छोरा नवराजले पिसाब थैली सात पिस मागेकामा दुई वटा मात्र पाए । ‘पेटमा झुन्ड्याउने यो ब्याग अस्पतालबाहिर फार्मेसीमा पाइँदैन । कुनै डेढ/दुई महिना पनि टिक्दैनन् । अभाव भएको भन्दै मागेजति दिएनन्,’ उनले भने ।
शान्त भवनका रूपमा परिचित पाटन अस्पताल स्थापनाको ६९ वर्ष बित्यो । युनाइटेड मिसनले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेकै १५ वर्ष बित्यो । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा चलेको १३ वर्ष बित्यो । मुलुकको केन्द्रीय अस्पताल भए पनि अझै यहाँ जनरलबाहेक विशिष्ट उपचारको सुविधा छैन । सस्तो र सुलभ भएकाले मुलुकभरबाट सर्वसाधारण उपचार गर्न पाटन आइपुग्नेको घुइँचो लाग्ने गर्छ । तर, यहाँ नसा, न्युरो, रक्तनली, क्यान्सरजस्ता रोगसम्बन्धी विशषेज्ञ छैनन् । प्लास्टिक र बर्न सर्जरी हुँदैन । यी रोग लागेका बिरामी महँगो शुल्क तिरेर निजीमा उपचार गराउन बाध्य छन् ।
सबै स्रोतसाधनले सम्पन्न मानिएको अस्पतालमा मुटु रोग विशेष सेवा छैन । आँखासम्बन्धी हेर्ने विभाग छ तर अप्रेसनको व्यवस्था छैन । ६० बेडको अप्रेसन वार्ड पनि अपुग छ । यहाँ नाक, कान, घाँटी र पेटको उपचार भने राम्रो मानिन्छ । ‘नसाको उपचारका लागि युनिट खडा गरी १० देखि १५ करोड लगानीमा अप्रेसन थिएटर खोल्न सकिन्छ । यसका लागि ठाउँ पनि पुग्छ । लगानी उठ्न एक वर्ष पनि लाग्दैन । बिरामीलाई फर्काउनुपर्दा अस्पताललाई उल्टो घाटा भइरहेको छ,’ एक चिकित्सकले भने, ‘अन्य रोगका विभागहरू पनि ८ देखि १० करोड लगानीमा सुरु गर्न सकिन्छ । तर, यसप्रति कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।’
प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ०९:३०
कञ्चनपुरमा ५१ दिनपछि कोरोनाबाट मृत्यु शून्य
दोस्रो लहर सुरु भएपछि १ सय ६३ को मृत्यु
कञ्चनपुर — कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि कञ्चनपुरमा ५१ दिनपछि सोमबार कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या शून्य भएको छ । वैशाख ४ देखि संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको थियो । केही दिनदेखि कम हुँदै गएपछि सोमबार र मंगलबार मृत्यु शून्य छ ।
कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितहरू । तस्बिर : भवानी/कान्तिपुर
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार दोस्रो लहर सुरु भएपछि वैशाख ४ मा १ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसयता दिनहुँ मृत्यु हुने क्रम जारी थियो । वैशाख २८ मा एकै दिन १५ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त दिन ११ जनाको महाकाली अस्पतालमा, २ जनाको होम आइसोलेसनमा र २ जनाको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । यो अवधिमा महाकाली अस्पतालमा दैनिक ४/५ जनाको मृत्यु भएको छ । महाकाली अस्पतालमा पनि केही दिनदेखि मृत्युदर घटेको छ । महाकाली अस्पतालमा संक्रमणका कारण १ सय जनाको मृत्यु भएको थियो, जुन दोस्रो लहरपछि मात्रै भएको हो । पहिलो लहरमा महाकाली अस्पतालमा ३ सय जना भर्ना भए पनि मृत्यु भएको थिएन ।
‘अब मृत्युदर घटिसकेको छ, बिरामी थपिने क्रम पनि कम भएको छ,’ अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. गोविन्द रोकायाले भने, ‘भाइरसले पनि आफ्नो नेचर बदले जस्तो लागेको छ, सामान्य खालका बिरामी अप्ठेरो भएर अस्पताल आउने क्रम घटेको छ, अहिले दीर्घरोगीहरूमा मात्रै समस्या देखिएको छ ।’ उनका अनुसार अहिले दिनमा एक/दुई जना मात्रै भर्ना भइरहेका छन् । संक्रमण बढी भएका बेला दैनिक २५/३० जना भर्ना हुने गरेका थिए ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट १ सय ७९ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये पहिलो लहरमा १६ जनाको र दोस्रो लहरमा १ सय ६३ जनाको मृत्यु भएको छ । ‘जिल्लाभरिमा लामो समयपछि मृत्यु शून्यमा पुगेको छ,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सिद्धराज भट्टले भने, ‘अब संक्रमण दर पनि निकै घटेको छ ।’ महाकाली अस्पतालमा केही दिनअघिदेखि नै बीचबीचमा मृत्यु शून्य भए पनि जिल्लाभरिमा वैशाख ४ पछि पहिलोपटक सोमवार मृत्युदर शून्य भएको हो । पछिल्लो समय परीक्षणको दायरा बढ्नुका साथै ग्रामीण भेगमा रहेको लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या पनि निकै घटेको छ ।
मंगलबार कञ्चनपुरमा ५१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ४७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । हाल जिल्लामा ५ सय २० सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा वैशाखपछि मात्रै ५ हजार ३० को पीसीआर परीक्षण गर्दा ३ हजार २ सय ७९ मा संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये ३ हजार ३ सय २ जना निको भएका छन् । वैशाखयतामात्रै १३ हजार ७ सय ९८ को एन्टिजेन परीक्षण भएको छ । जसमध्ये २ हजार १ सय ३९ मा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ०९:२८